musha nyika dzakabatana Akasanganiswa Maartist Jon Jones Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Kutanga, ane zita remadunhurirwa rekuti "mapfupa".
Chinyorwa chedu chinokupa chinyorwa chizere cheJon Jones Childhood Nyaya, Biography, Chokwadi cheMhuri, Vabereki uye Hupenyu hwepakutanga.
Zvikuru, Mararamiro aJones, Hupenyu hweMunhu uye zvimwe zviitiko zvinozivikanwa kubva paakanga ari mudiki kusvika paakave mukurumbira.
Hupenyu nekusimuka kwaJon Jones.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevakanyanya kusanganiswa martial artists. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveJon Jones' biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Jon Jones Childhood Nhau:
Kutanga, Jonathan Dwight Jones akaberekwa musi we 19th waChikunguru 1987 kuguta reRochester muNew York, US.
Murwi ndiye wechitatu pavana vana akazvarwa naamai vake, Camille Jones uye kuna baba vake, Arthur Jones Jr.
Kukura kuEndicott: Mufananidzo wehudiki waJon nemadzikoma ake.
Ehe, hapana mibvunzo nezve nyika yaJon nepo yake yeAfro-America dzinza uye mabviro emhuri achienda pasina kutaura.
Unoziva here kuti Jon akarererwa kuEndicott muNew York pamwe chete nevakoma vake Arthur Jones III uye mudiki mukoma Chandler Jones? Dhorobha rinozivikanwa nekuve nzvimbo yekuzvarwa yeBMM uye Endicott Johnson shangu.
Nekudaro, zvinoshamisa kuti tech uye kugadzira hakuna kumboita runyorwa rwezvido zvehudiki zvaJon uye zvekuzvivaraidza nazvo. Jon pane kudaro akakura aine zvaaifarira munhabvu uye nemitambo yekurwa, zvisinei nekurerwa kwake kwakasimba.
Jon Jones Mhuri Mamiriro:
Vabereki vaJon vaive vakakura pachinamato uye vairarama nekuita bhizinesi rechitendero. Baba vake vaive mutevedzeri wemufundisi apo amai vake vaishandawo muchechi, vachitsigira murume wavo.
Hazvishamisi kuti Jon anobva kumhuri yepasi-mhuri nekuti bhizinesi rezvitendero haribhadhare zvakawanda, kunyanya apo baba vake vaive mutevedzeri wemufundisi.
Kana naAmai vaJon kuswera vachiita mukoti kuita zvakawanda kusimudza mhuri kubva mumatambudziko emari.
Zvakadaro, vakashanda nesimba uye vakagara pamwechete vachidurura rudo pana Jon nevakoma vake kusanganisira hanzvadzi yake hombe Carmen Jones.
Jon Jones Dzidzo:
Panguva yaJon paakanga achiri kuyaruka, akatanga kupa zvipo zvake zvemujaho kutaura kwakanaka. Chekutanga kwaive kutora mukana wake wakanaka pakurwira kuEun-Endicott High School kuchamhembe kweNew York.
Akanga ari mumwe wevadzidzi vechikoro chepamusoro.
Ndichiri kuHighschool imwechete, Jon akatamba nhabvu uye akashanda muchikwata chechikoro chake semunhu aidzivirira. Yakanga iri pachikoro apo Jon akawana zita remadunhurirwa rekuti "Mapfupa" nekuti aive aine lanky furemu panguva iyoyo.
Jon Jones Makore Ekutanga Mukurwa Kwemitambo:
Zvingave zvisina kunaka kutaura kuti Jon haana kumbobvira ave nebasa rinonakidza rekutanga newrestling.
Izvi zvinonyanya kana munhu asina hanya nenyaya yekuti akadzidza muchidimbu kuIowa Center Community College.
Kugara kwake kwenguva pfupi pakoreji kwakamuona achiwana mari yakawanda mukwikwi yewrestling zvekuti akahwina mukwikwidzi wenyika yeJUCO asati aenderera mberi nekudzidza kutonga mhosva kuMorrisville State College.
Ona uyo akaiswa mari kukoreji kurwa senge yaive kosi yaaida kupasa aine A grade.
Jon Jones Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Kunyangwe Jon aida kuwana dzidzo yekutonga mhosva uye kufambira mberi semutsimba, munguva pfupi aifanira kusiya zvido zvataurwa.
Shanduko yekutendeuka yakazouya mushure mekumisidzana prodigy akaziva kuti musikana wake wekusekondari aive nepamuviri pake.
Akatanga kudzidziswa muMMA mushure mekuona kuti mumwe wesikana dzake aive nepamuviri pake.
Kufanana nababa chero vane mutoro, Jon akanzwa kudzvanywa kunoda kuita mari yakakwana kubhadhara mabhiri emangwana. Nekudaro, akasiya chikoroji ndokutanga kudzidzira mumitambo ine mari yekurwira inonzi yakavhenganiswa martial arts (MMA).
Nhengo dzemhuri yaJon Jones dzakatsigira (mupfungwa uye nemari) panguva yemugwagwa wake wakaoma wekurumbira makore.
Jon Jones Bio - Nyaya Yekubudirira:
Pasina mubvunzo kunyora zvakawanda, Jon akareketa kufambira mberi muMMA kwaive mukukwakuka uye kumiganhu zvekuti akaita dheti rake mukukunda kurwisa Brad Bernard mu2008. Akaenderera mberi nekuunganidza chinyorwa chisina kukundwa che6-0 asati asaina neUFC zvakafanana gore.
KuUFC, kwaive kukunda mushure mekukunda kwaJon akarwira nzira yake yekuve shasha yeUFC mudiki mushure mekukunda Maurício Rua mu2011.
Kurova mushure mekurova ndizvo zvakaitwa naJon kuti ave shasha yeUFC yekupedzisira.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora, Jon ane hunyanzvi rekodhi ye26 anokunda uye 1 hapana kukwikwidza. Kurasikirwa kwake chete kwakauya kubva mukukakavadzana kwakakakavadzana.
Kunyangwe zvakadaro, iye anonyanya kutaridzirwa kunge akanakisa paundi-ye-pondo murwi munyika. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Nezve Mudzimai waJon Jones - Jessie Moses:
Achienderera kuhupenyu hwerudo hwaJon, iye anofara akaroora panguva yekunyora kumusikana wake akazova mudzimai Jessie Moses. Vakaroorana vakasangana kuchikoro chesekondari kwavakatanga kufambidzana.
Yakanga isati yasvika gore ra2013 apo Jon akakurudzira kuna Jessie uye akamuita zviri pamutemo mudzimai wake pazuva risingazivikanwe.
Jon naJessie vave pamwe chete kweanopfuura makore gumi.
Hukama hwavo hwakakomborerwa nevanasikana vatatu panguva yekunyora. Ivo vanosanganisira Leah (akazvarwa 2008); Carmen Nicole Jones (akazvarwa 2009) uye Olivia Haven (akazvarwa muna 2013).
Jon anozivikanwa zvakare kuve nemwanasikana-anozivikanwa kubva kumusikana asina kuziviswa. Izvi zvinounza huwandu hwakazara hwevana vake ku4.
Mufananidzo waJon Jones vanasikana vana.
Jon Jones Mhuri Chokwadi:
Mhuri inotsigira inobatsira inoita kuti hupenyu husangova hwakanaka chete asi hunofanirwa kurarama. Izvi zvinonyanya kuoneka muhupenyu hwemhuri yaJon Jone. Pasina zvakawanda ado, hezvino chokwadi nezve Jon Jones nhengo dzemhuri kutanga nevabereki vake.
Zvimwe pamusoro paJon Jones Baba:
Baba vaJon havazi mumwe munhu asi mukuru Arthur Jones. Aive mubatsiri wepentekosta mufundisi panguva yehupenyu hwaJon achiri mudiki.
Chokwadi kudanwa kwake kwekunamata, Artur aigaro ita chokwadi chekuti kurera kwevana vake kwakanaka. Nekudaro, akavatendera kusarudza mitambo yavo yehudiki uye akavatsigira munzira yese.
Zvimwe nezvaJon Jones Amai:
Camille Jones aive amai vane rudo uye vanotsigira veMMA murwi. Akashanda semukoti wevakuru vane pfungwa vasina kugadzikana uye akatsigira murume wake kuchechi.
Amai ve4 vanozivikanwa kuve vanga vari mbiru yekutsigira vana vavo kunyangwe pavakaita bofu nekuda kwemhedzisiro yeshuga.
Kusvika parufu rwake mu2017, Camille aive mukuru waJon cheerleader uye akaiita poindi yebasa kumukurudzira nekuvapo kwake pakurwa kwake.
Nezve Jon Jones Vanun'una:
Jon ane hama yakura Jones III pamwe nehama mudiki inozivikanwa saChandler Jones. Ivo vaviri vanun'una vakakurumbira venhabvu vatambi vakahwina iyo yepamusoro mbiya. Kufanana nevabereki vavo, vese mukoma vanofarira kubhururuka kuenda chero kwaJon kunorwa.
Hanzvadzi yavo chete yaive Carmen Jones. Akafa nekenza yeuropi asati asvitsa makore gumi nemasere. Rufu rwake rwakaita kuti hama dziwedzere kutsunga kumira nekutsigirana parwendo rwavo rwenyika.
Jon Jones pamwe nehama dzake dzakafanana Arthur (L) naChandler (R).
Nezve Jon Jones Relatives:
Izvo hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezvemadzitateguru aJon uye mhuri midzi kunyanya sezvo ichienderana nababa vake nasekuru nasekuru.
Saizvozvowo, hapana zvinyorwa zveababamunini vemurwi, vanatete, uye babamunini apo vazukuru vake nevanin'ina vake vasingazivikanwe zvakanyanya panguva yekunyora kwaJon Jones 'biography.
Jon Jones Hupenyu hweMunhu:
Kune vanhu vashoma chete vanoziva nezve hunhu hwaJon Jone kupfuura zvaaiita zvetsiva. Gara kumashure apo isu tichifukunura chokwadi nezve iye murwi anoona. Sezvineiwo, iyo Cancer Zodiac chiratidzo inotsanangura hunhu hwaJon's Persona.
Iye ane chinzvimbo, anoteedzera nzira, asingazungunuke, uye zvine mwero anoratidzira ruzivo nezve hupenyu hwake hwakavanzika uye hwepamoyo.
Zvinodiwa nemurwi uye zvekunakidzwa zvinosanganisira kupenda, kupenda mitambo yebhora, kutamba basketball, kufamba, uye kushandisa nguva yakanaka neshamwari uye nemhuri.
Jon Jones Mararamiro:
Taura nezvekuti Jon Jones anogadzira nekushandisa mari yake sei, iyo huwandu hwehuwandu hweanofungidzirwa $ 12 miriyoni mambure akakosha anotora mavambo ayo kubva muhombe mibairo iyo yaanorongera kuhwina mabheji.
Zvimwe zvikamu zveupfumi hwake imari yemari inotepfenyurwa kubva kutsigira mabrands saAdidas, Reebok pakati pevamwe.
Nekudaro, iye anokwanisa kunakidzwa nekushandisa yakawanda kuwana zvinhu zvakaita semota nedzimba. Chii chimwe? anobhururuka mumajeti akavanzika!
Jon Jones Chokwadi:
Kupera nyaya yaJon Jones yehucheche uye biography, hezvino zvisina kutaurwa kana zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezve murwi.
Chokwadi: 1- Hurefu MMA Inosvika:
Wanga uchiziva here kuti murwi ane mukana wakareba kusvika muMMA? akamira pakureba kunoshamisa kwe6'4's kusvika kwaJon kwemasendimita 84.5 kunomupa kugona kurwisa vavengi vake ari kure.
Chokwadi # 2: Jon Jones Chitendero:
Pakutanga kwenyaya ino, waona kuti vabereki vaJon Jones vakakura pane zvechitendero. Jon haasi wekuvanza chimiro chake pazvinhu zvekutenda, nekuda kwekurerwa kwake kwechitendero! Iye murwi ari muchokwadi, muKristu anoenda kuchechi sezvinoita maKristu uye anozviti anotenda muna Mwari mumwe wechokwadi.
Chokwadi # 3: Jon Jones Tattoo:
Iyo yakajairika kuziva iyo nhema MMA nyeredzi Israel Adesanya ane ma tattoo achiri Kamaru Usman hazviiti. Kune rake divi, Jon ane tattoo ye "VaFiripi 4:13 pachipfuva chake. Chitsauko cheBhaibheri uye vhesi inoti "Ndinogona kuita zvinhu zvese kuburikidza naKristu uyo ​​simba…"
Ichokwadi # 4- Cop Mabasa:
Chekupedzisira, muJon Jones 'Biography, tinokupa chokwadi pamusoro peCop Duties. Kunyangwe asiri mupurisa, Jon anovenga chaiko kusarongeka uye kuba.
Ari munzira kuenda kuzita rake rekurwira kurwisa Mauricio "Shogun" Rua muUFC 128, murwi akawana ruzivo rwekuti gororo rakaba GPS mumotokari yevaviri vakura.
Jon, pamwe chete nevarairidzi vake, vakadzingirira gororo. Vakamukunda pasati pasvika mapurisa chaiwo.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Jon Jones Childhood Nhau uye Untold biography chokwadi.
Jon Jones Biography Chokwadi (Mibvunzo)
Zita rizere: Jonathan Dwight Jones
Zita rekudanwa: mapfupa
Zuva rekuzvarwa: 19 Chikunguru, 1987
Nzvimbo yekuzvarirwa: Rochester, New York, US
Vabereki: Arthur Jones Jr (Baba) naCamille Jones (Amai)
Hama: Jones III (Mukuru Mukoma) naChandler Jones (Mudiki Mukoma)
Hanzvadzi sikana: Carmen Jones (Kunonoka)
Basa: Akasanganiswa Marati Artist
kukwirira: 6 ft 4 mu (193 cm)
Age: 32 (Kubva paFebruary 2020)
Chekutanga Dzidzo: Union-Endicott High Chikoro